ထိုးပြီးဖိနပ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က Vogue သို့ရောက်ကြ၏။ အဆိုပါကြိုးသုံးပြီးဒီဇိုင်နာများကျွမ်းကျင်စွာမေ့လြော့သှားပြန်လည်ရှင်သန်ပေမယ့်အဆင်ပြေဖိနပ်နိုင်ဘူး။ in-အဓိကအားဖက်ရှင်အမျိုးသမီးလျင်မြန်စွာလူကြိုက်များရရှိခဲ့သည့်ထိုးပြီးဘွတ်ဖိနပ်, တင်ပြခဲ့ကြသည်။ သူတို့နီးပါးတိုင်းမိန်းကလေးရဲ့ဗီရို၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ရပြီတပြိုင်နက်, ဒီဇိုင်နာများပိုပြီးစွယ်စုံဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့ပြီးသောသေးသေးလေးဖိနပ်မှသတ်မှတ်ထားသည်။ မော်ဒယ်များ၏အမျိုးမျိုးဟာအလွန်လူကြိုက်များအိမ်သူအိမ်သားဖိနပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်အရာကသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥပမာ, ထိုးပြီးဖိနပ်, ဘဲလေးတိုက်ခန်း, ပြောင်းလဲပစ်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ကြိုး၏အဆင်တန်ဆာအမျိုးမျိုးတို့ကို, အလင်းသတ္တုသို့မဟုတ်ထည်ထူးခြားတဲ့နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုဖိနပ်ဒီလိုမျိုးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှမော်ဒယ်စေသည်။ ဘဲလေးတိုက်ခန်း, ဖိနပ်များနှင့်သမားရိုးကျဘဲလေးတိုက်ခန်းအသေးစိတ်ချည်များတွင်အသုံးပြုကြသည်ရိုးရာ options များအကြား, ခြေထောက်အလှဆင်ဖို့သူတို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်အဖြစ်, နှင့်ပြည်တွင်းမော်ဒယ်တွေများအတွက်အဓိကခြားနားချက်အရေးကြီးသောနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်နွေးထွေးမှုရှိပါတယ် - သူတို့အထူကြိုး၏လုပ်နေကြသည်။
သူတို့မိုးရွာရွာလေတိုက်ရာမှသင်တို့၏ခြေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မတတျနိုငျသောကွောငျ့, နွေဦးသို့မဟုတ်ဆောင်းဦးထက်ပိုနွေရာသီဗားရှင်း - ဘဲလေးကသမားထိုးပြီး။ ထို့ကြောင့်သူတို့တစ်တွေအလင်း, နွေရာသီအဝတ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားရပါမည်။ အားကစားရုံဖိနပ်ဒဏ်ငွေပန်းပွင့်ထဲမှာအတူတူစားဆင်ယင်နှင့်အတူကောငျးမှကြည့်ရှုမည်တောက်ပအလှဆင်ခြင်းမရှိဘဲတောက်ပဖြစ်ကြသည်။ စားဆင်ယင်ထိုကဲ့သို့သော chiffon အဖြစ်အလင်းထည်နှင့်ဖန်ဆင်းသောအဓိကအရာ။ လှပသောဘဲလေးတိုက်ခန်းနှင့်အတူဆင်မြန်း၏ပေါင်းစပ်ဆိုမိန်းကလေးမှဣတ္ထည့်ပါ။
စတိုင်ဘဲလေးတိုက်ခန်းဝတ်ထားသည်ရိုးရှင်းမှတ်မိ - သူတို့သည်သင်၏ပုံရိပ်နှင့်အတူရုံမိုးသည်းထန်စွာဖြစ်ကြရုံဆွဲဆောင်မှုရှိသောလက်ဝတ်ရတနာကိုရှောင်ရှားလွန်းလက်ဝတ်ရတနာဝတ်ကြဘူး။
အရေးကြီး: ကြိုးကနေဘဲလေးတိုက်ခန်းရုံးစတိုင်အဘို့အသင့်လျော်သည်မဟုတ်, အလွတ်သဘောတိုက်ရိုက် One-အရောင်အင်္ကျီနှင့်အင်္ကျီ, သူတို့ကအတော်လေးသင့်လျော်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
လာမယ့်ရာသီမှာတော့ဒီဇိုင်နာများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတိုင်အပေါ်မှီခိုကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်သူကဘဲလေးကသမားဂျင်းဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဆင်မြန်းအောက်မှာဝတ်ဆင်မရနိုင်သည်ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘဲလေးကသမားစောင့်ရှောက်စွယ်စုံလိမ့်မည်။ ပစ္စည်းများနှင့်အဆင်းအရောင်တစ်ဦးအမျိုးမျိုးအခြေခံကျကျဖက်ရှင်မှအရှုံးမပေးချင်ပါဘူးသူကိုပင်သူတို့၏အအာရုံကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
သီးခြားစီလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်သည့်သားရေဘဲလေးတိုက်ခန်းတွေအကြောင်းပြောလိုပါတယ်။ ဘဲလေးကသမားသားရေသာကြည့်ရှုစတိုင်, ဒါပေမယ့်လည်းကျန်းမာဖိနပ်ဆိုင်တော်မူ၏။ ဆရာဝန်များကသဘာဝပစ္စည်းများနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖိနပ်ကိုဝတ်ဆင်ဖို့အကြံပေးဒါကြောင့် 2013 ခုနှစ်ဒီဇိုင်နာများအရေပြားကိုအထူးအာရုံကိုပေးဆောင်နေကြသည်။
rounded ခြေချောင်းတွေနဲ့ဖက်ရှင်ဖိနပ်၏အမြင့်မှာတချို့အမှတ်တံဆိပ်ဖက်ရှင်နဲ့ချွန်ခြေချောင်းအမျိုးသမီးများပူဇော်ပေမယ့်။ အများဆုံးမော်ဒယ်၏တစ်ဦးတည်းသောခဲယဉ်းပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ပျော့ဘဝါးနှင့်အတူမော်ဒယ်အဘို့သင့်စုဆောင်းမှုအတွက်နေရာတစ်နေရာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူကိုဒီဇိုင်နာများရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင်အသစ်သတို့သမီးအကြားရေပန်းစားသတို့သမီးဘဲလေးတိုက်ခန်းဖြစ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးအဖြူတစ်ဖနောင့်ဖိနပ်မပါဘဲရိုးရာဖိနပ်ကိုအစားထိုးနိုင်ပြီး, အလှဆင်၏အခန်းကဏ္ဍကိုကျောက်များနှင့် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်ပြုမူနိုင်ပါတယ်။
ဘွတ်ဖိနပ် Hunter - အတုကနေမူရင်းရော်ဘာဖိနပ် Hunter ခွဲခြားဖို့ဘယ်လို?
ရွှေ Goose Sneaker
Multivarka အတွက်စပျစ်သီးပျဉ်နှင့်အတူ muffins
ဆောငျးရာသီခရမ်းချဉ်သီးနှင့်သခွားသီးအဘို့အသုပ် - အရှိဆုံးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများအိမ်မှာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်
AMH ဟော်မုန်း - IVF များအတွက်စံ
တစ်စက်ရုပ်လေဟာနယ်သန့်စင်ရွေးချယ်ဖို့ကိုဘယ်လို - သင်မဝယ်ခင်အာရုံစိုက်သင့်တယ်ဘာလဲ?
အဆိုပါဘက်တီးရီးယား Helicobacter - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး
မင်္ဂလာဆောင်အယ်လ်ဘမ် - ဖြတ်ညှပ်ကပ်
စကားပြန် Dream - နမ်းခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့သောဤအိပ်မက်အနက်ကိုဘော်ပြသနည်း
ဘင်္ဂလားကြောင်ဖောက် - ကျားသစ်အိမ်မှာတစ်ဦးမိတ္တူ
လေဆိပ်လုံခြုံရေး 19 အံ့သြစရာတွေ့ရှိချက်
ညဉ့်အဘို့အ Kefir - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပျက်ဆီး
အီတလီဆံပင် extension ကိုနည်းပညာ